Wadahadalka LIVE: Giroud wuxuu diyaar u yahay dhaqaaq - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Wadahadalka LIVE: Giroud wuxuu diyaar u yahay dhaqaaqa
Wadahadalka LIVE: Giroud wuxuu diyaar u yahay dhaqaaqa
Daaqadaha kala iibsiga ee horyaalada ugu muhiimsan Yurub waa xiran yihiin, laakiin waligood goor hore ma ahan in la sugo Janaayo. Guji halkan si aad u eegto xawilaadihii ugu dambeeyay iyo inaad ku wargeliso warka ugu dambeeya ee hoos ku qoran.
Muuqaalka TOP: Giroud oo careysan ayaa u dhaqaaqi kara Inter
Weeraryahanka Chelsea Olivier Giroud Gazzetta dello Sport ayaa soo warinaysa in ninka dhallintayar ee 33 sano laga yaabo inuu ka tago Stamford Bridge, wax ka yar laba sano ka dib markii uu saxeexay heshiiska. 18 milyan oo ginni oo ka soo baxday Arsenal.
Inter Milan ayaa xiiseyneysa weeraryahanka reer France, kooxda reer talyaani ayaa cadeysay in wadahadalada ay hada socdaan
Giroud maahan magac caadi ah. xaashida bilowga ah Frank Lampard ka dib kaliya kaliya kulamada 10 xilli ciyaareedkan iyo afar gool ayaa dhalisay. Tababarihii hore ee Chelsea Antonio Conte ayaa sheegay inuu doonayo inuu Giroud ka dhigo bedelkiisa Romelu Lukaku .
10: 56 GMT:  Tababaraha Arsenal Unai Emery wuxuu qirtay inuusan ogeyn haddii Granit Xhaka mar kale u ciyaari lahaa naadiga wuxuuna shaaca ka qaaday in ciyaaryahanka qadka dhexe uu u sheegay inuusan diyaar u aheyn inuu ciyaaro kulanka Premier League ee ay sabtida la ciyaarayaan Leicester City. Xhaka ayaan u ciyaarin kooxda tan iyo markii uu carooday asaga iyo taageerayaashiisa jamaahiirta kooxda Arsenal garoonka Emirates Stadium kulankii barbaraha 2-2 ee ay la ciyaareen Crystal Palace bishii October 27.
“Waxaan kala hadlay isaga dareenkiisa Talaadada. Hada iyo maskaxdiisa maxaa yeelay si fiican ayuu u tababaranayaa, laakiin wuxuu ii sheegay inuusan ciyaari karin,” Emery ayaa ka sheegay shir uu ka qeyb galayay. saxaafadda.
Agaasimuhu wuxuu sheegay in Arsenal ay sugi doonto in Xhaka uu kujiro maskaxda saxda ah ee uu ku ciyaaro “Waxaan ubaahanahay ciyaaryahan sida Granit Xhaka. Laakiin sidoo kale, garan maayo inuu mar kale ciyaari doono, ”ayuu Emery u sheegay BBC.
Markii la weydiiyay suurta galnimada Xhaka suuqa kala iibsiga ee Janaayo, macalinka ayaa ku jawaabay inuusan ka fikirin arintaas maxaa yeelay waxay aheyd kaliya November.
Waxaan ciyaari doonaa ciyaaro badan bilaha November iyo December. Laba bilood gudahood kuma beddali karno, ayuu yidhi Emery. Kooxda ayaa la hadlaysa waxaan go aansan doonaa xaaladiisa iyo sida aan u maleynayo inaan u isticmaaleyno.
10h03 GMT: Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa ka hadlay wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan kooxda. oo uu weheliyo weeraryahanka Paris Saint-Germain Kylian Mbappe iyagoo sheegay in kooxda heysata horyaalnimada Yurub ay awoodi kari weyday inay saxeexdo.
Way adag tahay in la iibsado ciyaartooydan, Klopp . “Uma arko koox hadda ka iibsan karta PSG Kylian Mbappe. Ma arko wax naadi ah, waa sidaas oo kale. Annaguna waxaan ku hawlannahay naadiyo aan qaban karin. Waa wax fudud sida
"Hagaag, dhinaca aragtida isboortiga, ma jiraan sababo badan oo aan u saxiixno. Waa kuwee ciyaartoyga uu yahay Laakiin waxay ku saabsan tahay lacagta dabcan. Nasiib ma leh. Gabi ahaanba fursad malahan. Waan ka xunahay dilka sheekadan. "
Xiddigan caalamiga ah ee 20 ee da’da Faransiiska ah ayaa waligiis xiriir la lahaa Real Madrid tan iyo markii ay ku burbureen goobtii ay ku sugnaayeen da’yarka magaalada Monaco. Bilowga toddobaadkan, Agaasimaha Isboortiga ee PSG, Leonardo Kulankii uu la yeeshay Zinedine Zidane ka dib markii tababaraha Madrid uu meesha ka saaray riyadii carruurta Mbappe: u ciyaar kooxda reer Spain. .
Zidane ayaa ka hadlay sida uu u jecel yahay Mbappe caruurnimadiisa markii uu qabtay shirkiisa jaraa'id ee Talaadadii ka hor kulanka Champions League ee Arbacada. Galatasaray iyo Leonardo ma aysan faraxsaneen.
“Daacad ahaan, waa waxoogaa xanaaq badan, ayuu yiri ciyaaryahanka reer Brazil.“ Waxaan u maleynayaa inaysan aheyn waqtigan inaan kahadalno. “Marka ugu horreysa, Kylian wuxuu ahaa qandaraas qandaraas anaga nala jooga labo sano iyo badh ka badan. Anigoo ka hadlaya mar kasta riyooyin iyo rabitaan, Waxaan u maleynayaa inay tahay waqtigii waxoogaa la joojin lahaa.
“Kylian aad ayuu muhiim noogu yahay - waa ciyaaryahanka ugu fiican da’yarka Faransiiska, ku guuleysiga adduunka iyo mid ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican adduunka. Xilligan la joogo ma aha in la garaaco oo lagu xasiliyo. Daacadnimo, waxaa la joogaa xilligii taasi la joojin lahaa. "
09h00 GMT: Barcelona ayaa wajaheysa a Luis Suarez jahwareer in ilaha ay dhahaan ESPN FC in aysan hubin waxa. Haddii weeraryahanka reer Uruguay uu dalab rasmi ah ka helo kooxda Major League Soccer .
Saaxiibka ay isku kooxda yihiin ee reer Uruguay, Nicolas Lodeiro, oo u ciyaara kooxda Seattle Sounders, ayaa shaaca ka qaaday isbuucaan in hogaamiyaha Barca uu doonayay inuu u wareego MLS intii uu joogay Spain.
Lodeiro ayaa yiri: “Waxaan qabaa inaad ku qanciso Barcelona sababtoo ah wuxuu doonayaa inuu yimaado MLS. “Had iyo jeer wuxuu i weydiiyaa su'aalo ku saabsan horyaal. Hamigiisa wuxuu ahaa inuu u ciyaaro Barcelona. Waxa uu ku ciyaaraa heer fiican halkaasna wuxuu ku dareemaa raaxo.
Si dhakhso ah ama hadhow, wuxuu ku biiri doonaa MLS, si kastaba ha noqotee. Hagaag, aan rajeyno sidaas. Wuxuu jecel yahay horyaalnimada. Had iyo jeer wuxuu i weydiiyaa wax ku saabsan. Waxaan u maleynayaa inay tahay waxyar oo waqti halkan ah. "
Marka laga hadlayo Camp Nou, waxaa la aqoonsan yahay in Suarez, oo lahaan doona 33 sano bisha Janaayo, uusan ka aheyn ciyaaryahankii Liverpool ee la soo saxiixday ee loogu talagalay 75 milyan euro 2014.
Si kastaba ha noqotee, wuxuu weli yahay mid ka mid ah lambarrada ugu wanaagsan ee 9 ee ciyaarta wuxuuna dhaliyay sideed gool kulamada 12 xilli ciyaareedkan.
PAPER SPEECH (Waxaa qoray Shaun Reynolds): Pogba ayaa ugu dambeyntii ka tagi kara Old Trafford Rodriguez
Manchester United ayaa hogaamineysa loolanka loogu jiro adeegyada James Rodriguez Real Madrid, laakiin dhammaystirka talaabadan ayaa laga yaabaa inay dhinaca isu rogto Paul Pogba ka bixitaanka Old Trafford.
Bayaanada Isbaanishka Eldesmarque Waxaa soo wariyay in hogaamiyaha Mareykanka Ole Gunnar Solskjaer uu ku hogaamiyay tartankii lagula jiray Rodriguez, kaasoo sidoo kale xiiso ka helay Tottenham iyo Wolverhampton.
Sida ay sheegayaan wararka xanta ah, heshiiska lagu keenayo ciyaaryahanka khadka dhexe ee weerarka ka ciyaara ee Real Madrid ayaa u arka Pogba inuu u saxiixo kooxda reer Spain, inkastoo Faransiisku xiriir dhow la leeyahay u dhaqaaqista Juventus.
Ka dib markii amaah lagu siiyay xilli ciyaareedkii hore Bayern Munich, Rodriguez, 28, si dhakhso ah ayuu ugu soo laabtay Bernabeu laakiin wuxuu ciyaaray kaliya sagaal kulan tartamada oo dhan, oo ay ku jiraan afar keydka.
Qandaraaska lixda sano ee uu Rodriguez la galay Real Madrid ayaa soo afjaraya dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Emery wuxuu diyaar u yahay inuu lacag ku qarash gareeyo Demiral
Unai Emery ayaa xiiseynaya saxiixa daafaca Juventus Merih Demiral sida laga soo xigtay Kubadda Cagta Turkiga .
Sida laga soo xigtay ilo wareedyo, Arsenal ayaa xiriir la sameysay wakiilo matalaya Demiro, kaasoo horey ugu soo ciyaaray hal mar kooxda reer talyaani xilli ciyaareedkan, marka lagu daro afartiisii ​​isreebreebka ee Euro. filashooyinka Turkiga.
Demiro ayaa ka tagay Sassuolo, oo ay isku kooxda yihiin ee Serie A, intii lagu jiray xagaagii, waxaana la soo weriyey in Maurizio Sarri uu ka soo horjeeday Arsenal inuu u adeego da’da da’da 21 waqtigaas.
Haddii aan aaminsanahay warbixinta, Arsenal waxay diyaar u tahay inay bixiso wax ka badan 25 milyan ginni oo ah wiilka dhalinyarada ah.
- Goorma ayaa suuqa kala iibsiga dib loo furi doonaa?
- Dhammaan heshiisyadii kala iibsiga weynaa way dhammaadeen
- Ka dib markii uu arkay Valencia 4 guuldaradii 1 ee Champions League horaantii isbuucaan, Manchester United ayaa haatan xiiseyneysa seddex ka mid ah da 'yarta Spain. Plaza Deportiva ayuu yiri daafaca bidix Jose Gaya khadka dhexe Carlos Soler iyo weerarka Ferran Torres Dhammaantood waxay hoos imanayaan kormeerka suuqa kala iibsiga ee Solskja laga bilaabo Janaayo ilaa soo socota.
- Steve Bruce, Tababaraha Newcastle, wuxuu ku dhawaaqay inuu doonayo inuu keeno Granit Xhaka oo ay amaahday kooxda Arsenal  dhexdeeda dhibaatooyinka ka dhex dhaca wadooyinka qadka dhexe ee garoonka Emirates Stadium. The Guardian-ka ayaa soo sheegay in tababaraha Magpies, Bruce, oo kooxdiisu afar dhibcood ka fog tahay heerka ugu hooseeya ee Premier League, inuu yahay nin aad u xiiseeya da’yarka 27 sano - gaar ahaan awooddiisa orodka.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/blog-transfer-talk/story/3984943/live-transfer-talk-chelseas-olivier-giroud-set-for-inter-move-in-january
Ciyaarta saaxiibtinimo ee Australia-Chile ee haweenka ayaa soo jiidata rikoorka taageerayaasha 20 029
Wareysiga AP: Madaxweynaha Barca wuxuu isku diyaarinayaa soo afjarida Messi